Kenya oo dalka Masar kula safatay muranka biyo-xireenka Webiga Nile | Xaysimo
Home War Kenya oo dalka Masar kula safatay muranka biyo-xireenka Webiga Nile
Kenya oo dalka Masar kula safatay muranka biyo-xireenka Webiga Nile
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhiggiisa Masar Abdel-Fattah El-Sisi u sheegay in Kenya ay taageersan tahay mowqifka Masar ee muranka kala dhaxeeya Ethiopia ee salka ku haya biyo-xireenka ay Addis Ababa ka sameyneyso webiga Nile.
Afhayeenka El-Sisi, Bassam Rady ayaa sheegay in madaxweynaha uu taleefon ka helay dhiggiisa Kenya, kaasi oo ay kaga wada hadleen muranka biyo-xireenka kadib markii ay burbureen wada-hadalladii Washington ay dhex-dhexaadineysay ee Masar, Ethiopia iyo Sudan.
Kenyatta ayaa mowqifka Masar ku qeexay mid ku saleysan “rabitaanka siyaasad daacad ah”, sida lagu sheegay bayaanka.
Xiisadda Masar iyo Ethiopia ayaa kasii dartay kadib markii Addis Ababa ay ka baaqatay wareegii ugu dambeeyey ee wada-hadallada ee 26-kii Febraayo lagu qabtay magaalada Washington, ayada oo sheegtay inay u baahan wada-tashi dheeri ah.
Taageerada Kenya ay u muujisay Masar ayaa muujineysa sida ay usii kala fogaanayaan Nairobi iyo Addis Ababa, oo markii horeba ku loolamayey siyaasadda gobolka.
Labada dal ayaa xiisad iyo loolan aan toos ahayn uu ku dhex-marayaa Soomaaliya, halkaasi oo Ethiopia ay taageersan tahay dowladda federaalka ah, halka Kenya ay gacan siiso maamulka Jubaland.